नेपालको सीमा कटेपछि विदेश जाने महिलाको सर्वस्व लुटिन्छ – PathivaraOnline
Home > प्रवास > नेपालको सीमा कटेपछि विदेश जाने महिलाको सर्वस्व लुटिन्छ
admin October 30, 2019 प्रवास, विचार	0
काठमाडौं । रामेछापकी राधा कार्की (नाम परिवर्तन) वैदेशिक रोजगारीमा नेपालबाट ओमन जान भनेर २ महिनाअघि हिडेकी थिइन । कार्की (४४ वर्ष) भारत हुँदै बंगलादेश एजेन्टमार्फत पुगेको बताउँछिन् । भारतको सिलगुडी हुँदै बंगलादेश पुगेर ४० दिन बसेपछि नेपाल फर्किएकी उनको पीडा दुःखत छ ।
नेपालबाट एजेन्टले घरेलु कामदारका रुपमा ओमन लैजाने भन्दै बंगलादेशसम्म पुरार्‍याएका थिए । नेपालको छिमेकी देश बंगलादेशमै पाएको पीडा उनका लागि नमेटिने घाउ बनेको छ । उनी त्यहीबाट एजेन्टकै सहयोगमा नेपाल फर्किन ।
पैसा तिरेर इज्जत लुटायौं, आफूसँगै रोग भित्रियो होला कसरी उपचार गर्ने ?
‘काठमाडौंमा घरेलु काम गरेर गुजारा चलाइरहेकी थिँए । सोही क्रममा एक जना घरेलु काम गर्ने तामाङ साथीसँग भेट भयो । उनीसँग दिदी बहिनीको जस्तो सम्बन्ध भयो । तामाङ बहिनीले दिदी के नेपालमा दुःख गर्नु विदेशतिर जाँउ भनेर जोड गरिन । त्यसपछि एक जना एजेन्टमार्फत विदेश जान्न दुई जनाले नै राहदानी बुझायौं,’ वैदेशिक यात्राको सुरुवातको कथा सुनाउँदै राधा भनिन, ‘हामीले राहदानी बुझाएको एजेन्ट राकेश मैनाली हो । उसैले हामीलाई भारत हुँदै बंगलादेश पठाएको थियो । बंगलादेशमा त यति दुःख पाइयो कि सम्झिदाँ श्वास नै थुनिएजस्तो हुन्छ । अर्काको लैहलैहमा लागेर वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्दा धेरै दुःख भोगेर फर्किए । सर्वस्व गुमाएर नेपाल फर्केकी छु ।’
उनीसँगको कुराकानीका क्रममा उनले पाएको शारीरिक र मानसिक पीडाको झल्को उनको अनुहारले दिन्थ्यो । घरिघरि आँखाभरि आँसु पार्ने उनको अधिकांश समय स्वर रुन्चे हुन्थ्यो भने बोलिनै पिच्छे गला अबरुद्ध हुन्थ्यो । यी पीडित राधालाई हामीले वैदेशिक रोजगार विभागमा भेटाएका थियौं । उनी वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीमा परेको र पीडक एजेन्टलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्ने बाटो खोज्दै विभागमा आइपुगेकी थिइन ।
‘नेपालको सिमाना नाघेपछि नेपाली एजेन्टले नै जे मन लाग्यो त्यही गर्छन । यतिसम्म तुच्छ व्यवहार गर्छन की सम्झिँदा जीउ सिरिङ भएर आउँछ । बंगलादेशको राजधानी ढाका पुग्न गाडीमा ४५ मिनेट लाग्ने दूरीमा हामीलाई राखेको थियो । नेपाली, दक्षिण भारतका, बंगाली महिलाहरु पनि त्यहाँ हामी बसेका ठाँउमा थिए,’ उनले बंगलादेश बसाईको बयान गरिन् ।
कुवेतमा विदेशी महिला बेच्ने गोदाम
बसेको ठाउँको बारेमा सुनाउँदा उनको गला धेरै पटक अवरुद्ध भएको थियो भने, आँखाबाट उनले नै थाहा नपाई आँसु खसिसकेको थियो । गोजीबाट रुमाल निकालेर आँसु पुच्छै केहि सम्यम भएर उनले फेरि भन्न थालिन्, ‘के भन्नु कसरी सुनाउनु… । नेपाली नै सीमा कटेपछि दानब हुँदा रहेछन् । सँगै गएका एजेन्टले बोलेको धेरै कुरा त म तपाईंलाई भन्न सक्दिन,’ उनी धेरै भाबुक पनि बनिन् ।
‘घरको काम गर्ने भनेर गएको । काम गर्ने देश मै नपुगी यौन प्यास मेट्न सामूहिक रुपमा आएका परपुरुषको सामना गर्नुपर्‍यो । नेपाली एजेन्टले नै नेपालमा यही नपुगेर आएको हैन भन्दै बंगाली, श्रीलंकाका पुरुषसँग राखेर एउटै कोठामा थुनिदिए । हामीलाई विच्छिप्त पारे । मैले भोगेको पीडा अरु भन्न सक्दिन ।’ नेपालका एजेन्टले सीमा कटेपछि घरमा आमा, दिदीबहिनी र छोरी हुन्छन् भन्ने नै बिर्सँदा रहेछन् ।
बंगलादेशको प्रहरीले छापा मारेको सुनेपछि एजेन्टले नेपाल फर्काएको पनि उनले बताइन । ‘हामी बसेका ठाउँमा दक्षिण भारतका महिलाहरु पनि बन्धक जस्तो बनाएर राखिएको थियो । कहाँबाट उजुरी पर्‍यो । उनीहरुको उद्धारका लागि प्रहरी आएछ । त्यो थाहा पाएपछि हामीलाई लैजाने एजेन्टले नै पैसा दिएर नेपाल फर्कायो । मसहित ४ जना त्यो नारकीय जीवनबाट मुक्ति पाएर नेपाल आइपुगेका छौं । अब बाँच्ने आशा पलाएको छ । तर, जता हेरेपनि उजाड लाग्छ । त्यो एजेन्टलाई उसले गरेको पापको सजाय नदिइ मेरो मन शान्त हुनेवाला छैन,’ निक्कै आक्रोशित भएकी उनले भनिन् ।
‘ससुरा र देवरको यौन शोषण श्रीमानलाई भन्न सकिँन’
राधासँग अन्य दुई जना युवती पनि साथमा थिए । ती युवतीले विभागमा मार्स्क लगाएर बसेका थिए । उनीहरु चाँही बोल्न मानेनन् । ‘राधाले म चाँही बुढी भएर मुख देखाएको हु । उनीहरु जवान छन्। इज्जत सवै लुटिएपछि कसरी अनुहार देखाउन त । हामीलाई फसाउने एजेन्टलाई कडा कारवाही हुनुपर्‍यो सर,’ उनले भनिन् । ‘हामी सबैले एजेन्टलाई ओमन जान १ लाख ७० हजारका दरले बुझाएका छौ । एकतिर पैसा सकियो । अर्कोतिर शरीरिक शोषणमा परेर रोग पो लाग्यो भने डर छ । हाम्रो स्वास्थ्य परिक्षण कसले गरिदिन्छ । रोग लाग्यो भने कसरी उपचार गर्नु ।’
बंगलादेश र भारतमा बसेर नुवाकोटकी फुजु प्रजा नाम गरेकी एक जना महिला एजेन्ट छिन । उनले नेपालबाट गएका महिलालाई भारत र बंगलादेशबाट खाडीका देश, केन्या, इराक र मलेसिया पठाउने गरिरहेको राधाले बताइन । उनले भनिन, ‘ती महिलाको बंगलादेशस्थित नेपाल राजदूतावासका कर्मचारीसँग सिधा सर्म्पक छ । दूतावासका कर्मचारीसँग प्रजाको उठबस नै छ । त्यही भएर बंगलादेश हुँदै अन्य देश लैजान त्यहाँ पुर्‍याएको महिलाको समस्या दूतावासले हत्तपत्त सुन्दैन् ।’
राधा जस्ता धेरै महिला वैदेशिक रोजगारीका नाममा आर्थिकसँग शारीरिक शोषणमा पर्ने गरेका छन् । यसरी शारीरिक शोषणमा परेका महिलाको स्वास्थ्य तथा समाजमा पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्कन समस्या हुने गरेको छ ।
इराकमा लुटिएकी नेपाली चेली– पुरुष देख्दा पनि डर लागेर आउँछ !
सरकारले ४ वर्षअघि खाडीका देश र मलेसिया घरेलु महिला कामदार पठाउन बन्द गरेको छ । सरकारले वैधानिक ढंगले पठाउन बन्द गरेपछि भारत, बंगलादेश र चीन हुँदै तेस्रो देश दलालले नेपाली महिलाहरुको रोजगारीका नाममा तस्कर गरिरहेका छन् । भारत हुँदै मासिक २ हजारभन्दा धेरै नेपाली महिला खाडीका देश, मलेसिया, युरोप र अफ्रिका तस्करी भइरहेको माइती नेपालले जनाउँदै आएको छ ।
मानव तस्करीमा संलग्न एजेन्ट र दलालको प्राय पहिचान नखुल्दाँ कानूनी दायरामा ल्याउन समस्या भइरहेको प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिविआइ)ले जानकारी दिएको छ ।
सबैको दु:खमा साथ दिने शिशिर भण्डारीको यस्तो अवस्था? सबैले हेरि शे’यर ग’रिदिनुहोला (भिडियो सहित)
अाफन्त भेट्न अष्ट्रेलिया पुगेकि काैशिला नेपाल फर्किइनन्
अमेरिकाकाे भिषा एप्लाइ गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए तपार्इको यी विवरण अवस्य बुझाउनुस
अमेरिकामा चुनाव जितेका एक नेपालीले यसरी गीतालाई साक्षी राखेर शपथ लिएपछि (भिडियो सहित)